कोरोना खोपको पहिलो परीक्षण आज अमेरिकामा हुँदै, परीक्षणमा ४५ जना सहभागी हुने ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/कोरोना खोपको पहिलो परीक्षण आज अमेरिकामा हुँदै, परीक्षणमा ४५ जना सहभागी हुने !
एजेन्सी – विश्वभर वितन्डा मच्चाइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध तयार पारिएको पहिलो खोपको मानवमा परीक्षण गरिने भएको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगाउन विकास गरिएको खोप पहिलो पटक मानव परीक्षण सोमबार गर्न लागिएको हो। खोपको पहिलो परीक्षण गर्न लागिएको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुको दावी छ। अमेरिकी सरकारी अधिकारीलाई उदृत गर्दा अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले सम्प्रेषण गरेको समाचार अनुसार खोपको पहिलो परीक्षण सीयाटल स्थित कैसर पर्मानेन्टे वाशिंगटन स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्थानमा हुनेछ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानको आर्थिक सहयोगमा तयार पारिएको खोपको परीक्षणमा ४५ जना वयस्क अमेरिकी स्वयंसेवीहरू सहभागी हुने बताइएको छ।परीक्षणमा सहभागी हुने स्वयंसेवीहरूको शरीरममा खोपका विभिन्न मात्रा चढाइनेछ। यधपी स्वयंसेवीहरू कोरोनाभाइरस संक्रमित हुनेछैनन्।
स्वयंसेवीहरूमा उक्त खोपको ‘साइड इफेक्ट’ बारे बुझ्नको लागि परीक्षण हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ। उक्त खोपले बिरामीको कोषलाई भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन वा रोगविरुद्ध लडेर निको पार्न आवश्यक प्रोटीन उत्पादन गर्न सक्रिय बनाउने खोप विकासकर्ताहरुले विश्वास लिएका छन्।
सोमबार हुने परीक्षण सफल भएका अझ ठूलो परिमाणमा परीक्षण गर्ने विकासकर्ताहरुको योजना छ। पहिलो चरणमा कोरोनाभाइसविरुद्धको भ्याक्सीनको मात्राले प्रतिरक्षा प्रणालीले कुनै प्रतिक्रिया जनाए वा नजनाएको जाँच हुने बताइएको छ। एमआरएनए १२७३ नामकरण गरिएको यस खोपको परीक्षणको नतिजा हेरेर अन्य कदम चालिनेछ।